पुस २४, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकबारे नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति बिपरित भएको जनाएका छन् । उक्त बिधेयकका बिरुद्द आफूहरु सडकदेखि सदनसम्म छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विधेयक नपढी गरिएको टिप्पणी गरिएको भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै थापाले विधेयकमाथि बहस गर्न चुनौती दिए । ‘मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु छलफल गर्ने हो ? संसदमा गर्ने हो ? माइतीघरमा गर्ने हो ? हामी तयार छौं’ उनले सञ्चारमन्त्रीकै शैलीमा भने ‘नपढी आयो भनेर हामीलाई हेप्नी ?’ सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले बिहिबार माइतिघरमा विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।